यो देश कसको ? | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७० पुष १६, मंगलवार ०६:३५ गते
असोज महिनाको १० गते चारैतिर बन्दको हल्लाखल्ला रहेको मेरो कानमा सुन्नमा आइरहेको थियो । विद्यालय लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरामा म अलमल्ल परेको थिएँ । बहिनी र म त्यसदिन बिहान आ–आफ्नो साइकल बनाउन साइकल दोकानतर्फ लाग्दै थियौँ । केही क्षणपछि साइकल पसल पुगियो, तर दुर्भाग्यवश ! साइकल पसल बन्द रहेको थियो । अंकलले विद्यालय लाग्छ भन्ने खबर लिएर हामीलाई लिन आउनुभएको थियो । मेरो साइकल बनाउनु पर्ने निकै नै जरूरी थियो । त्यसैले, मैले मेरी बहिनीलाई अंकलसँग जान बताएँ र आफू साइकल बनाउन लैजाने कुरा खुलस्त गराएँ ।
त्यस ठाउँमा अरु साइकल पसल केही थिएन, तर एउटा ठूलो भीरको बीचमा साइकल पसल रहेको पत्ता लगाएँ र सकी–नसकी म त्यस पसलतर्फ गएँ । साइकल बनाउने दाइले मेरो साइकल जाँच गरेर साइकलको दबाई, अर्थात् पार्टपुर्जा लिन माथि निस्कनुभयो । म एक्लो भीरको बीचमा थिएँ, तर मलाई त्यहाँ एक्लै बस्न निकै नै डर लागेको थियो । त्यसैले म पनि त्यस दाइसँगै जाने निर्णय गरेँ र सकी–नसकी उकालो लागेँ । तर, अकस्मात् मेरो खुट्टाले गाडीको गियर झैँ उकालो लाग्न नसकेर ब्याक गियर लाउन पुग्यो र म त्यो भीरबाट खसेँ । केही क्षणपछि म बिउँझिएँ र हिँड्न थालेँ ।
सुनसान ठाउँ कता जाने हो कता, मलाई केही थाहा थिएन । अलि पर पुगेपछि खोला देखेँ र अलि पर मैले एउटा सानो मन्दिर देखेँ । म त्यसै मन्दिरतर्फ दौडिँदै दौडिँदै पुगेँ र हेरेँ । त्यहाँ मैले मेरा पुराना साथीहरुलाई फोटो खिचिरहेको देखेँ । मलाई त्यस मन्दिर गोरखा दरबारको मन्दिरजस्तै लागेको थियो । त्यहाँ रहेका सारा कुरा मैले देखेँ । मेरा साथीहरु मेरो नजिक आइपुगेँ र सोधे– ‘तँ कसरी यहाँ आइपुगिस् ?’ मैले मेरा सारा घटनाहरु बताएर अन्त्यमा सोधेँ, ‘किन आउनु हुन्नथ्यो ?’ त्यसपछि मेरो एक साथीले मलाई सोध्यो– ‘तँ कहाँ आइस्, तँलाई थाहा छ ?’ मैले भनेँ– ‘गोरखा दरबार होइन र ? त्यसपछि मेरो अर्को साथीले भन्यो– ‘हो, तर चाइनाको । मलाई पत्यार नै लागेको थिएन र सोधेँ– ‘कसरी ?’
र, मेरा साथीहरुले मलाई मन्दिरको छेउ, अर्थात् रेलिङबाट तल हेर्न लगाए । साँच्चै मैले त्यहाँबाट तल सारा चाइनिज मान्छेहरुलाई मात्र देखेको थिएँ । थुप्रै थिए, कोही के खाँदै थिए त, कोही यत्तिकै बसेका थिए र कोही लुगा धुँदै थिए । म निकै नै त्रसित पनि भएँ, खुशी पनि भएँ । एकछिनपछि ठूलो प्रहरीको हूल नै आयो र हामी हत्त न पत्त त्यस मन्दिरनेर लुक्न खोज्यौँ । कोही त हाम्रो नजिक आएर अलमलमा परे । मलाई भने निकै डर लागेको थियो– न त मसँग पासपोर्ट नै थियो, न त मसँग केही नै थियो । त्यसपछि मैले ठूलो प्रहरीको हूल गएपछि साथीहरुलाई भनेँ– ‘जाऊँ, साथी यहाँ नबसौँ । न यहाँ हामीसँग केही नै छ, भरे फेरि त्यही प्रहरीहरु आउलान् र मार्लान् ।’ त्यसपछि हामी भाग्न तयार भएर हिँडेका मात्र के थियौँ, एउटा प्रहरी त्यसै मन्दिरमा बसेको रहेछ । त्यस प्रहरीले हामीलाई बोलायो र चाइनिजमा भन्यो । म निकै नै त्रसित थिएँ र के गरौँ भनेर छट्पटिइरहेको थिएँ ।
म केही क्षणपछि मात्र बिउँझिएँ, तर निकै त्रसित अवस्थामा । मलाई पत्तो नै भएन कि म ओछ्यानमा छु भन्ने । म त्यतिबेला निकै नै डराएको थिएँ, त्रसित थिएँ र खुसी पनि थिएँ । यो त एक सानो उदाहरण नै मात्र रह्यो, तर सवाल छ अब देशको ।
के मेरो सपना साँच्चै नै बिपनामा बदलिन्छ कि यो सपना मात्रै हो ? तर अपेक्षा गर्छु, यो सपना सपना नै रहोस् । मैले देख्न त चाइना देखेँ, तर भारतको हात भने सीमा अतिक्रमणमा निकै नै देखेको छु । आज भारतले बुद्ध उसैको देशमा जन्मेको, तराईका भूमि उसैको देशमा पर्छ भन्दा देश मौन छ । भोलि सवाल छ देशको । दुई अर्ब जनसंख्याका बीच केही करोड नेपालीको केही लाग्न सक्दैन । दिन प्रतिदिन देशमा अशान्ति र आतंक मात्र छ । सब नेताहरु देशका लागि होइन, आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र बाँचेका छन् । म त केवल पन्ध्र वर्षको नै त हुँ, तर म जस्ता कयौँ पन्ध्र काटिसकेका राजनीतिक दलका नेताहरु छन् यो देशमा । तर तिनीहरु आज सबै मौन छन् ।
यस देशमा रहेको शोषण, अन्याय, अत्याचार आदिले गर्दा मलाई लाग्न थालिसक्यो, के नेपाल भारतको एउटा टुक्रा हो ? दिन प्रतिदिन नेपाली राजनीतिक दलहरु भारत धाउँछन् । केका लागि, म कुरै बुझ्न सक्दिनँ । कोही भन्छन्– लोडसेडिङ घटाउन । कोही भन्छन्– बजेटको सहयोग लिन । तर मलाई भने यो पटक्कै मन परेको छैन । भोलि अवस्था आउन सक्छ कि हामी स्वतन्त्र नेपाली भएर बाँच्न छाडेर भारतीय नागरिकका रुपमा अगाडि आऔँ । । भोलि गोर्खा दरबार उनैको होला, कोसी उनैको होला, काठमाडौँ उनैको होला, सुन्दर चितवन उनैको होला, यहाँको संस्कृति उनैको होला आदि इत्यादि । यी सारा उनैको भएपछि तब के गर्न सक्छन् यी नेताहरु ?
दिन प्रतिदिन विदेशी हस्तक्षेप रहेको नेपालको अवस्था मैले त बुझिसकेँ भने अब पालो छ सारा नेपाली नागरिकले बुझ्नुपर्ने । देशको जटिल अवस्था बुझ्न जरूरी छ भैसकेको छ । देशका राजनीतिक दलहरुमाथि आवाज उठ्न जरूरी छ । यतिका वर्ष यही भूमिमा रह्यौँ, यसै माटोमा आफ्नो कर्म ग¥यौँ र अब यसैलाई गुमाउन कसलाई पो मन हुन्छ र ! त्यसैले, अब यस देशका लागि केही गर्न नागरिकको ठूलो हात रहेको देखिन्छ । त्यसैले, अब नेपालीको आवाज पनि बोल्ने नेता चाहिएको छ, हामीलाई । किनकि, देशलाई भीरबाट जोगाउन जरूरी छ । देशलाई हाम्रो खाँचो छ । त्यसैले, हित चाहने मान्छे चिन्न जरूरी छ ।